ရျောနယျဒိုက မကျဆီထကျ ဘယျနရောမှာ ၂ဆ သာနလေဲ ! - SPORTS MYANMAR
ရျောနယျဒိုက မကျဆီထကျ ဘယျနရောမှာ ၂ဆ သာနလေဲ !
၂၀၁၀ ပွညျ့နှဈကနအေခုထိ ဆယျစုနှဈအတှငျး မှာ အကောငျးဆုံး ကစားသမား အဖွဈ ဘာစီလိုနာ တိုကျစဈမှူး မကျဆီကို Goal ကရှေးခယျြသှားခဲ့ပါတယျ။ မကျဆီဟာ ဘာစီလိုနာအတှကျ ဆုဖလားတှေ နှဈစဉျရယူပေးထားနိုငျခဲ့ပမေယျ့ အဆိုပါကာလအတှငျးမှာ နိုငျငံတကာ ဆုဖလားတှေ တလုံးတလေ တောငျ မရထားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ လညျး မျောဒနျဘောလုံး လောက မှာ သူနဲ့ အပွိုငျဖွဈနတေဲ့ ပျေါတူဂီ အိုငျကှနျ ရျောနယျဒို ရဲ့ ပရိသတျတှကေ လကျမခံနိုငျဖွဈခဲ့ကွတာဖွဈပါတယျ။သူတို့နှဈဦးဟာ အခုဆယျစုနှဈအတှငျး ဘလှနျးဒီအောဆု ၄ကွိမျ စီ ဆှတျခူးထားခဲ့ပွီး သကျဆိုငျရာ ကလပျအသငျးတှနေဲ့ လညျး အောငျမွငျမှုတှရေရှိထားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ နိုငျငံ အသငျးအတှကျ ယူရို ခနျြပီယံ ဆု နဲ့ ဥရောပနိုငျငံမြားဖလားတှကေို ရယူပေးထားနိုငျခဲ့တဲ့ ရျောနယျဒိုကိုကြျောပွီး မကျဆီကို The Greeatest of All Time ဘောလုံးသမိုငျးရဲ့ အကွီးမွတျဆုံး အဖွဈ သတျမှတျနကွေတဲ့ အပျေါကို ရျောနယျဒို ဖနျတှကေ နားမလညျနိုငျဖွဈနတောလညျးဖွဈပါတယျ။
သူတို့ ၂ဦးစလုံး ဟာ လကျရှိအခြိနျမှာ အသကျ ၃၀ ကို ကြျောလှနျနကွေပွီဖွဈပွီး ကစားသမား ဘဝအကောငျးဆုံး အချြနျတှကေို ကြျောဖွတျထားခဲ့ကွပွီလညျးဖွဈပါတယျ။ဒါပမေယျ့ အသကျအရှယျနဲ့ မလိုကျတဲ့ ‘ ငါမအိုသေး ‘ ဆိုတဲ့ စှမျးဆောငျရညျမြိုးကိုဆကျပွီးပွသနခေဲ့လို့ နှဈယောကျစလုံးရဲ့ ပရိသတျတှအေတှကျ ကနြေပျစရာကောငျးနတောဖွဈပါတယျ။
တကယျတမျး မှာသူတို့ နှဈဦးအနကျ ဘယျသူက ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံး ကစားသမားဖွဈတယျ ဆိုတာကိုပွောရတကယျခကျပွီး တဦးခငျြးသာမက အသငျးအတှကျ စှမျးဆောငျပေးထားမှု တှမှော ဘယျသူကမှ ဘယျသူထကျ သိသိသာသာ ကြျောလှနျနခွေငျးမရှိတာဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ကမ်ဘာ့ဘောလုံး ပရိသတျတှေ ကွားမှာ တော့ ရျောနယျဒိုက မကျဆီကို ကြျောပွီး ပျေါပြူလာ အဖွဈဆုံး ဘောလုံးသမားအဖွဈရပျတညျနတောဖွဈပါတယျ။နာမညျကြျောလူမှုကှနျယကျတှဖွေဈတဲ့ တှဈတာ၊ facebook နဲ့ အငျစတာဂရမျတှေ မှာ ရျောနယျဒိုကပဲ ပရိသတျအမြားဆုံး ဘောလုံးသမားအဖွဈ ပွတျပွတျသားသားကိုဦးဆောငျနတောဖွဈပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ လညျး မီဒီယာ လုပျငနျးရှငျတှနောမညျကွီးစြေးကှကျ စပှနျဆာ တှအေတှကျ တော့ ရျောနယျဒိုရဲ့ ပုံရိပျက အသုံးအဝငျဆုံး နညျးလမျးအဖွဈရှိနတောဖွဈပါတယျ။ဒါကွောငျ့ လညျး ဒီပျေါတူဂီ စတားရဲ့ အငျတာဂရမျကနေ ပွီးခဲ့တဲ့နှဈဝငျငှဟော ပေါငျ ၃၈.၂သနျးအထိ ရှိခဲ့ပါတယျ။
ဒါဟာ သူ့ရဲ့ မဟာပွိုငျဘကျဖွဈတဲ့ မကျဆီရဲ့ အငျစတာဂရမျဝငျငှေ ထကျ၂ဆ အထိရှိနတောလညျးဖွဈပါတယျ။မကျဆီဟာ သူ့ရဲ့ postsတှကေနေ ပေါငျ ၁၈.၇ သနျးသာရခဲ့ပွီး တတိယအမြားဆုံး အဖွဈတော့ နာမညျကွီး ကစားသမားဟောငျးတဦးဖွဈတဲ့ ဘကျခမျးက ပေါငျ ၈.၆သနျးနဲ့ ရပျတညျနပေါတယျ။
ရျောနယျဒိုဟာ အသကျ ၃၄ ရှိနပွေီဖွဈပမေယျ့ မကွာသေးမီကမှ ကစားသမား ဘဝ သှငျးဂိုး ရ၀၀ ပွညျ့သှငျးယူနိုငျခဲ့ပွီး ကှငျးတှငျး စှမျးဆောငျရညျကောငျးကို ပွသနဆေဲဖွဈသလို ကှငျး
ပွငျပမှာ လညျး ပရိသတျတှကေို အတျောလေးလှမျးမိုးထားနိုငျနသေေးတယျဆိုတာကို မွငျရမှာဖွဈပါတယျ။
ရျောနယျဒိုလိုပဲ လူမှုကှနျယကျတှေ မှာ ရပေနျးစားတဲ့ ကြျောကွားသူတှကေတော့ ကနျဒယျဂနျြနာနဲ့ ဆလီနာ ဂိုးမကျဈတို့ဖွဈပါတယျ။ရျောနယျဒိုဟာပွီးခဲ့တဲ့ ၁၂ လအတှငျးမှာ အငျစတာဂရမျpost ၃၄ခုတငျခဲ့ပွီး တခုခငျြးစီကနေ ပေါငျ ရ၈၀,၀၀၀ ခနျ့ရရှိခဲ့ လို့ စုစုပေါငျး ဝငျငှေ ပေါငျ ၃၈ သနျးကြျောရခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဒီအတောအတှငျးမှာမကျဆီက အငျစတာဂရမျမှာ post ပေါငျး ၃၆ ခုတငျခဲ့ပမေယျ့ တခုခငျြးအတှကျ ပေါငျ ၅၁၈,၀၀၀ သာရခဲ့လို့ စုစုပေါငျး ၁၈.၇ သနျးသာရှိခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ဘကျခမျးရဲ့ post တှကေတော့ တခုလငျြ ပေါငျ ၂၈၆,၀၀၀ သာရခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
အငျစတာ ဂရမျကနေ ဝငျငှအေကောငျးဆုံး ဘောလုံးသမားတှထေဲမှာ နမောလညျးပါဝငျနပွေီး post တခုခငျြးအတှကျ ပေါငျ ၅၇၈, ၀၀၀ ( စုစုပေါငျး ပေါငျ ၅.၈ သနျး ) ရရှိနပေါတယျ။ဝါရငျ့တိုကျစဈမှူးကွီး မိုဗဈကတော့ post တခုခငျြးစီအတှကျ ပေါငျ ၁၆၀,၀၀၀ နဲ့စုစုပေါငျးပေါငျ ၃.၂ သနျးရရှိခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။
ရော်နယ်ဒိုက မက်ဆီထက် ဘယ်နေရာမှာ ၂ဆ သာနေလဲ !
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်ကနေအခုထိ ဆယ်စုနှစ်အတွင်း မှာ အကောင်းဆုံး ကစားသမား အဖြစ် ဘာစီလိုနာ တိုက်စစ်မှူး မက်ဆီကို Goal ကရွေးချယ်သွားခဲ့ပါတယ်။ မက်ဆီဟာ ဘာစီလိုနာအတွက် ဆုဖလားတွေ နှစ်စဉ်ရယူပေးထားနိုင်ခဲ့ပေမယ့် အဆိုပါကာလအတွင်းမှာ နိုင်ငံတကာ ဆုဖလားတွေ တလုံးတလေ တောင် မရထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် လည်း မော်ဒန်ဘောလုံး လောက မှာ သူနဲ့ အပြိုင်ဖြစ်နေတဲ့ ပေါ်တူဂီ အိုင်ကွန် ရော်နယ်ဒို ရဲ့ ပရိသတ်တွေက လက်မခံနိုင်ဖြစ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးဟာ အခုဆယ်စုနှစ်အတွင်း ဘလွန်းဒီအောဆု ၄ကြိမ် စီ ဆွတ်ခူးထားခဲ့ပြီး သက်ဆိုင်ရာ ကလပ်အသင်းတွေနဲ့ လည်း အောင်မြင်မှုတွေရရှိထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် နိုင်ငံ အသင်းအတွက် ယူရို ချန်ပီယံ ဆု နဲ့ ဥရောပနိုင်ငံများဖလားတွေကို ရယူပေးထားနိုင်ခဲ့တဲ့ ရော်နယ်ဒိုကိုကျော်ပြီး မက်ဆီကို The Greeatest of All Time ဘောလုံးသမိုင်းရဲ့ အကြီးမြတ်ဆုံး အဖြစ် သတ်မှတ်နေကြတဲ့ အပေါ်ကို ရော်နယ်ဒို ဖန်တွေက နားမလည်နိုင်ဖြစ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ ၂ဦးစလုံး ဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ အသက် ၃၀ ကို ကျော်လွန်နေကြပြီဖြစ်ပြီး ကစားသမား ဘဝအကောင်းဆုံး အခ်ျန်တွေကို ကျော်ဖြတ်ထားခဲ့ကြပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် အသက်အရွယ်နဲ့ မလိုက်တဲ့ ‘ ငါမအိုသေး ‘ ဆိုတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်မျိုးကိုဆက်ပြီးပြသနေခဲ့လို့ နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် ကျေနပ်စရာကောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တမ်း မှာသူတို့ နှစ်ဦးအနက် ဘယ်သူက ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ကစားသမားဖြစ်တယ် ဆိုတာကိုပြောရတကယ်ခက်ပြီး တဦးချင်းသာမက အသင်းအတွက် စွမ်းဆောင်ပေးထားမှု တွေမှာ ဘယ်သူကမှ ဘယ်သူထက် သိသိသာသာ ကျော်လွန်နေခြင်းမရှိတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာ့ဘောလုံး ပရိသတ်တွေ ကြားမှာ တော့ ရော်နယ်ဒိုက မက်ဆီကို ကျော်ပြီး ပေါ်ပျူလာ အဖြစ်ဆုံး ဘောလုံးသမားအဖြစ်ရပ်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နာမည်ကျော်လူမှုကွန်ယက်တွေဖြစ်တဲ့ တွစ်တာ၊ facebook နဲ့ အင်စတာဂရမ်တွေ မှာ ရော်နယ်ဒိုကပဲ ပရိသတ်အများဆုံး ဘောလုံးသမားအဖြစ် ပြတ်ပြတ်သားသားကိုဦးဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် လည်း မီဒီယာ လုပ်ငန်းရှင်တွေနာမည်ကြီးဈေးကွက် စပွန်ဆာ တွေအတွက် တော့ ရော်နယ်ဒိုရဲ့ ပုံရိပ်က အသုံးအဝင်ဆုံး နည်းလမ်းအဖြစ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် လည်း ဒီပေါ်တူဂီ စတားရဲ့ အင်တာဂရမ်ကနေ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဝင်ငွေဟာ ပေါင် ၃၈.၂သန်းအထိ ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒါဟာ သူ့ရဲ့ မဟာပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ မက်ဆီရဲ့ အင်စတာဂရမ်ဝင်ငွေ ထက်၂ဆ အထိရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မက်ဆီဟာ သူ့ရဲ့ postsတွေကနေ ပေါင် ၁၈.၇ သန်းသာရခဲ့ပြီး တတိယအများဆုံး အဖြစ်တော့ နာမည်ကြီး ကစားသမားဟောင်းတဦးဖြစ်တဲ့ ဘက်ခမ်းက ပေါင် ၈.၆သန်းနဲ့ ရပ်တည်နေပါတယ်။
ရော်နယ်ဒိုဟာ အသက် ၃၄ ရှိနေပြီဖြစ်ပေမယ့် မကြာသေးမီကမှ ကစားသမား ဘဝ သွင်းဂိုး ၇၀၀ ပြည့်သွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီး ကွင်းတွင်း စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းကို ပြသနေဆဲဖြစ်သလို ကွင်း
ပြင်ပမှာ လည်း ပရိသတ်တွေကို အတော်လေးလွှမ်းမိုးထားနိုင်နေသေးတယ်ဆိုတာကို မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရော်နယ်ဒိုလိုပဲ လူမှုကွန်ယက်တွေ မှာ ရေပန်းစားတဲ့ ကျော်ကြားသူတွေကတော့ ကန်ဒယ်ဂျန်နာနဲ့ ဆလီနာ ဂိုးမက်စ်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ရော်နယ်ဒိုဟာပြီးခဲ့တဲ့ ၁၂ လအတွင်းမှာ အင်စတာဂရမ်post ၃၄ခုတင်ခဲ့ပြီး တခုချင်းစီကနေ ပေါင် ၇၈၀,၀၀၀ ခန့်ရရှိခဲ့ လို့ စုစုပေါင်း ဝင်ငွေ ပေါင် ၃၈ သန်းကျော်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအတောအတွင်းမှာမက်ဆီက အင်စတာဂရမ်မှာ post ပေါင်း ၃၆ ခုတင်ခဲ့ပေမယ့် တခုချင်းအတွက် ပေါင် ၅၁၈,၀၀၀ သာရခဲ့လို့ စုစုပေါင်း ၁၈.၇ သန်းသာရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘက်ခမ်းရဲ့ post တွေကတော့ တခုလျင် ပေါင် ၂၈၆,၀၀၀ သာရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အင်စတာ ဂရမ်ကနေ ဝင်ငွေအကောင်းဆုံး ဘောလုံးသမားတွေထဲမှာ နေမာလည်းပါဝင်နေပြီး post တခုချင်းအတွက် ပေါင် ၅၇၈, ၀၀၀ ( စုစုပေါင်း ပေါင် ၅.၈ သန်း ) ရရှိနေပါတယ်။ဝါရင့်တိုက်စစ်မှူးကြီး မိုဗစ်ကတော့ post တခုချင်းစီအတွက် ပေါင် ၁၆၀,၀၀၀ နဲ့စုစုပေါင်းပေါင် ၃.၂ သန်းရရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။